Semalt विशेषज्ञले किन खोज र SEO महत्त्वपूर्ण छ भनेर वर्णन गर्दछ
यदि तपाईं व्यवसायको मालिक हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि उपभोक्ता यात्रा प्रायः खोजीबाट सुरू हुन्छ। प्रयोगकर्ताहरूले खोजीहरू विकल्पहरू पूरा गर्न, समस्याहरू समाधान गर्न, र अन्य चीजहरू गर्न प्रयोग गर्छन् जुन उनीहरूलाई फाइदाजनक भेट्दछन्। २०० in मा निजी डिनरमा बिल गेट्सले आफ्नो पाहुनालाई सम्बोधन गरे र ठेगानामा उनले उल्लेख गरे कि खोजको भविष्य क्रियापद हो।
यस सन्दर्भमा, उनले खोज बक्समा मानिसहरूले टाइप गरेका शव्दहरूलाई स .्केत गरिरहेको थिएन तर यसको सट्टामा, किन उनले मानिसहरूलाई खोजिरहेका थिए भन्ने कुरा गर्दै थिए। यसकारण Semalt मान्छे किन खोज्छन् भनेर बुझ्न धेरै समय र प्रयास समर्पित गरियो। यो ज्ञानको साथ, हामी आज तपाईंले सुन्नुहुने अचम्मका चीजहरू गर्न सक्षम छौं।
हामी किन खोजी गर्छौं?
इन्टर्नेट र खोज इञ्जिनको प्रारम्भिक वर्षहरूमा व्यक्तिहरूले कागजातहरूको खोजी र खोजी गर्नु पर्दछ जुन उनीहरूले खोज क्वेरीमा प्रयोग गरेको सटीक शब्दहरू समावेश गर्दछ। यो, तथापि, खोज आज कसरी गर्ने भन्ने होइन। खोजीकर्ताहरूले अब समस्याहरू समाधान गर्न, विविध कार्यहरू सम्पन्न गर्न वा केहि अरू गर्न खोज्न सक्दछन्।
हामी खोज इञ्जिनहरू प्रयोग गर्दछ उडानहरू अनलाइन बुक गर्न, केहि खरीद गर्न वा हाम्रो मनपर्ने गीतहरूको गीतहरू पाउनको लागि तर विशेष गरी जब कुनै इमेनिम जस्तो व्यक्ति। हामीले इन्टरनेट प्रयोग गर्न जे पनि छनौट गर्छौं एउटा कार्य हो जुन गेट्सलाई क्रियाहरू भनिन्छ।
जब हामी खोज क्वेरी इनपुट गर्छौं, हामी यात्रा शुरू गर्दछौं। बजारहरूले यस यात्रालाई उपभोक्ता यात्रा भन्छन्। यो प्रयोगकर्ताको मार्ग वर्णन गर्न काल्पनिक तरीका हो जुन उनीहरूले यस कार्यलाई सम्पन्न गर्न सुरू गरेदेखि नै। धेरै प्रयोगकर्ताहरू एक खोज संग आफ्नो उपभोक्ता यात्रा शुरू।
पछिल्लो दशकमा, उपभोक्ता यात्राले खोजमा ठूलो भूमिका खेलेको छ। तपाईंले उपभोक्ता फनेलको बारेमा सुनेका हुन सक्नुहुन्छ; यसको मतलब उपभोक्ता यात्रा जत्तिकै हो। यो उपभोक्ता जागरूकताको बिन्दुबाट विचारमा कसरी सर्छ र अन्तिम खरीदको वर्णन छ। उपभोक्ता यात्राको यो मोडेल पुरानो भएको छ यद्यपि हामीले अझै पनि चित्रण उद्देश्यका लागि फनेल मोडललाई सन्दर्भ गर्दछौं।
खोजीको विकास र यसले कसरी उपभोक्ता यात्रा परिवर्तन गरेको छ
आधुनिक उपभोक्ता यात्रा अब फनेलको रूपमा वर्णन गर्न सकिँदैन। यसको सट्टामा, अधिक सही वर्णन धेरै पा tw्ग्रा र मोडहरूका साथ पागल पराल हुनेछ। प्रत्येक डाईभर्सन, मोड, वा परालमा मोडले विभिन्न च्यानलहरू, माध्यमहरू, र उपकरणहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन प्रयोगकर्ताहरू आज अन्तर्क्रिया गर्दछन्।
यो कहिल्यै विकसित भइरहेको इकोसिस्टमसँग मेल गर्न, खोजीको पृष्ठमा सरल शब्दहरूबाट विकसित गर्नुपर्‍यो प्रयोगकर्ताको आशय तिनीहरूको यात्राको प्रत्येक बिन्दुमा सहि बुझ्नको लागि। खोज ईन्जिनहरू केवल कुञ्जी शव्दहरू बुझ्ने क्षमता भन्दा बाहिर गएका छन्। यो सहि प्रयोगकर्ताहरूलाई सही तुरून्त सही सामग्री प्रदान गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ ताकि प्रयोगकर्ताहरू कुनै ढिलाइ बिना आफ्नो कार्यहरू सम्पन्न गर्न सक्दछन्।
प्रयोगकर्ताहरूका लागि यो सबै क्रियापदहरूको बारेमा हो। बजारका रूपमा, हाम्रो एकमात्र उद्देश्य भनेको उनीहरूको यात्रामा प्रयोगकर्ताहरूलाई मद्दत गर्नु हो किनकि हामी उनीहरूको निर्णयहरूमा प्रभाव पार्ने प्रयास गर्छौं। परालको मोडेलको साथ, यो स्पष्ट छ कि आजको उपभोक्ता यात्रा अब एकल उपकरणमा हुने छैन।
प्रयोगकर्ताहरूले आज उनीहरूको मोबाइल उपकरणहरूमा खोजी सुरू गर्न, उनीहरूको ट्याब्लेट वा डेस्कटपमा अनुसन्धान जारी राख्न र स्मार्ट ब्लुटुथ गृह सहायक स्पिकरमा अर्डर गर्न सक्दछन्। खोजी अब केवल कम्प्युटर वा फोनहरूमा सीमित छैन। इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न उपकरणहरूबाट खोज इञ्जिन प्लेटफर्महरू पहुँच गर्न सक्दछन्। स्मार्टवाचहरू, स्मार्ट चश्मा, फ्रिजहरू, ब्लुटुथ स्पिकर सहायकहरू अब इन्टरनेट पहुँचको साथ इम्बेड गरिएको छ जसले खोजलाई बढी सुविधाजनक र प्रयोगकर्ताहरूका लागि पहुँचयोग्य बनाउँदछ।
खोज मार्केटरहरूको रूपमा, यो हाम्रो कार्य हो कि यी घटनाक्रमहरूको ट्र्याक राख्दछ र यी उपकरणहरू कसरी एक अर्कामा सम्बन्धित छन् र कसरी प्रयोगकर्ताको खोजी अनुभवमा उनीहरूले एउटा भूमिका खेल्दछन् भनेर मोनिटर गर्न।
आजको एसईओ मा, हामी बढी केन्द्रित छौं:
डाटा संचालित अंतर्दृष्टि
प्राविधिक समस्या समाधान
सामग्री मार्केटिंगको तीन मुख्य तम्बुहरू
खोजीले तीन प्राथमिक क्षेत्रलाई छोयो, अर्थात्:
पहिलो भाग, "आकर्षित गर्नुहोस्", जुन खोजीमा बढी केन्द्रित छ। आश्चर्यजनक उत्पादनहरू भएको ग्यारेन्टी छैन कि तपाईं ईन्टरनेटमा सफल हुनुहुनेछ। तपाईं बहु च्यानलहरू र आउटलेटहरू मार्फत ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। यसैले हामी तपाईंको वेबसाइटमा प्रत्येक पृष्ठलाई SEO पृष्ठ बनाउँछौं। यदि हामी सम्भावित ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्ने, यी आगन्तुकहरूलाई सaging्लग्न गर्ने, र ग्राहकहरूलाई परिवर्तन गर्ने योजना बनाइरहेका छौं भने, यस प्रक्रियामा योगदान दिने प्रत्येक पृष्ठमा एसईओ कम्पोनेन्ट हुनुपर्दछ।
खोजीको साथ, तपाईं जो कोही र सबैले फेला पार्न सक्नुहुन्छ, यसको मतलब तपाईंको वेबसाइट अनुकूलित गरेर, तपाईं नि: शुल्क विज्ञापन पाउनुहुनेछ।
के एसईओ यति महत्त्वपूर्ण बनाउँछ
पहिलो पटक तपाईले कुनै पेशेवरलाई वेबसाइट बनाउने बारेमा कुरा गर्नुभए पछि, हामी निश्चित छौं तपाईंले SEO शब्द सुन्नुभयो। यस लेखमा, हामीले प्रयोगकर्ता, उनीहरूको यात्रा, खोज र क्रियापदहरू विस्तृत रूपमा वर्णन गरेका छौं। तपाईंलाई थाहा छ कि प्रयोगकर्ताहरू महत्त्वपूर्ण छन्, र धेरै पटक, तिनीहरूको यात्रा खोजीसहित सुरु हुन्छ। तर के एसईओ महत्वपूर्ण बनाउँछ?
के एसईओ मात्र केहि विकासकर्ताहरू चिन्तित हुनुपर्दछ। त्यहाँ यसको लागि प्लगइन छ? खोज ईन्जिनहरूले मेरो वेबसाइट पत्ता लगाउन सक्षम हुनुपर्दछ। यी सबै ग्राहकहरूको राय हुन् जुन हामीले काम गरेका छौं।
हामीले यस लेखलाई गेट्स उद्धरणका साथ सुरु गरेका थियौं तर हामीले के उल्लेख गरेनौं त्यो मात्र Google एक मात्र वेबसाईट हो जसले उक्त सल्लाहलाई हृदयमा लिएको थियो। गुगलले यसको खोज इञ्जिन एल्गोरिथ्म परिमार्जन गर्न र शब्दबाट कार्यमा सार्ने प्रयास गरेको छ ताकि यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको ध्यान केन्द्रित गरिरहन मद्दत गर्न सक्छ। नतिजाको रूपमा, हामीले अपडेटहरू ह्विमबर्ड, र्याकब्रेन, पांडा, मोबाइलगेडन, पोसम, पेन्गुइन, कबूतर, र अरू धेरै देख्यौं। यी सबै अद्यावधिकहरूले मात्र हामीलाई देखाउँदैनन् कि गुगल प्रयोगकर्ताहरूको आशय बुझ्नको लागि कटिबद्ध छ, तर यसले यो पनि देखाउँदछ कि प्रयोगकर्ताको आशय बुझ्नु कुनै साधारण कार्य होईन।
पछाडि फर्केर हेर्दा, सबै एसईओ पेशेवरहरु सहमत हुन्छन् कि एसईओ लामो यात्रामा आयो, विशेष गरी जब यो केहि कुरा हो जुन तपाईंले मेटाडेटा भित्र भित्र काम गर्नुभयो। निस्सन्देह, त्यहाँ धेरै उत्तम अभ्यासहरू छन् जुन विकास टोलीले अध्ययन गर्नेछ, तर तपाईंले प्रत्येक मुद्दामा यसको आशा गर्नुहुन्न।
यसमा हेर्ने एक तरीका यो हो कि वेबसाइटहरू वेबसाइट भन्दा उनीहरूको वेबसाइट भन्दा अनुप्रयोगहरू जस्ता बढी हुन्छन्। अनुप्रयोगहरू धेरै फेन्सी सुविधाहरूसँग आउँदछ जुन कहिलेकाँही खोज ईन्जिनसँग राम्रोसँग खेल्दैन।
SEO महत्त्वपूर्ण छ केवल यसले मात्र होइन यो तपाईंको वेबसाइटलाई यसको उत्कृष्ठ बन्न बाध्य गर्दछ तर अनिवार्य रूपमा किनभने यसले उपयोगकर्ताको अनुभव सुधार गर्दछ। यो यसरी सोच्नुहोस्; तपाईंले भर्खर एउटा कन्डो निर्माण समाप्त गर्नुभयो। त्यो भवनमा बस्न खोज्ने जो कोहीले शीर्ष-खाजा फिनिशिंग, गुणस्तरीय सामग्रीको आशा गर्नेछ, र यो उनीहरूको साथीलाई देखाउन सक्ने कुरा हुनुपर्छ। साधारणतया भवनलाई हेरेर र यसको कोठाहरूमा हिंडेर, सम्भावित खरीददारले या त मुस्कुराउँछ वा भवनमा रुचि हराउँछ।
ठीक छ, SEO त्यस्तै छ। हो, हामी एसईआरपी को पहिलो पृष्ठमा तपाइँलाई प्राप्त गर्न SEO प्रयोग गर्छौं, तर ती सबै अन्त्यका लागि साधन हुन्। हाम्रो प्राथमिक उद्देश्य प्रयोगकर्ताहरु लाई ग्राहकहरु लाई अभ्यागतहरुबाट रूपान्तरण गराउनु हो। एसईओ महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसको बिना तपाईले आफ्नो लगानी गुमाउनुहुनेछ। व्यवसाय मालिकको रूपमा, हामीलाई थाहा छ कि तपाईले अनुभव गर्न चाहानु भएको कुरा होइन।
आज राम्रो एसईओ के हो?
SEO सामग्रीमा मात्र ध्यान दिनको लागि विकसित भएको छ, तर यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि मद्दत गर्दछ:
सजिलैसँग उही पृष्ठको बहु संस्करणहरूमा नेभिगेट गर्नुहोस्।
प्राविधिक मुद्दाहरूको समाधान गर्नुहोस् जुन पृष्ठ वा सामग्री ईन्जिन बट्समा अदृश्य बनाउन सक्दछ।
सामाजिक मिडिया, सशुल्क खोजी, प्रयोगकर्ता अनुभव, वा एनालिटिक्सको साथ एकीकृत गर्नुहोस्।
उचित सर्भर सेटिंग को साथ।
तिनीहरूको साइटको गति बढाउने नयाँ तरिकाहरू फेला पार्नुहोस्।
एक राम्रो एसईओ पेशेवर को खोजकर्ताहरु को लागी उनीहरूको वरिपरिको प्रतिस्पर्धी परिदृश्य बुझ्न आवश्यक छ। प्रयोगकर्ताको कार्य बुझ्न मात्र पर्याप्त छैन; खोज मार्केटरहरूको रूपमा यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले खोज ईन्जिन प्रयोगकर्ताहरूलाई अझ राम्रा समाधानहरू प्रदान गर्न भर्न सक्ने खाली ठाउँहरू पत्ता लगाउन अन्य विकल्पहरू के उपलब्ध छन् भनेर पनि हामीले बुझ्नु पर्छ।
धेरै बर्षमा हामी लामो यात्रामा आएका छौं। SEO पेशेवरको रूपमा, हामी अब बहु टोपी लगाउँदछौं हामी विकास, सूचना, वास्तुकला, प्रयोगकर्ता अनुभव, सामग्री रणनीति र अधिक जडान गर्दा। हामी खेल बुझ्छौं, र हामी यी सबै चीजहरू सिर्जना गर्नका लागि गर्छौं जुन सर्च इन्जिन र प्रयोगकर्ताहरूको लागि काम गर्दछ।
त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् जुन साइटले यातायात गुमाउन सक्दछ वा SERP बाट पूरै हराउँदछ, व्यवसायलाई जोखिममा राखेर। साधारण सत्य तपाईंले आफ्नो वेबसाइटमा बनाउने सबै परिवर्तन हो, चाहे सानो वा ठूलो, एसइओलाई असर गर्छ। यदि तपाईं महान परिणामहरू हेर्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने यो उत्तम हो कि तपाईं एसईओ फ्रन्ट फ्रन्ट सुरू गर्नुहोस् र यसलाई प्रोजेक्टभरि निर्माण गर्नुहोस्।
खोज महत्त्वपूर्ण छ किनकि प्रयोगकर्ताहरू महत्त्वपूर्ण छन्। टेक्नोलोजीको क्रम जारी रहँदा, हामीले लगातार नयाँ औंलाहरूमा खोजी हुने तरिकाहरू र खोजी गर्ने विकसित विकृत मार्गहरू पत्ता लगाउन हाम्रो औंलाहरूमा निरन्तर रहनुपर्दछ किनकि एउटा कुरा निश्चित छ, र त्यो हो कि मानिसहरूले खोजी गर्न जारी राख्नेछन्। किन मानिसहरू खोज सधैं रहनेछ।